Usihlalo weGoodtone Imove Gaming - ukwesekwa okuzinzile nokuguquguqukayo
Ababhali abaningi be-iMore bangabadlali bamageyimu, ngakho-ke akumangazi ukuthi iningi lethu likhetha izihlalo zemidlalo ezinhle kakhulu njengesihlalo sokudlala samaGoodtone Imove esikhundleni sezitulo zamahhovisi zendabuko ezizosebenza. Izihlalo zemidlalo zivame ukuncika kude kune-ergonomic o engcono kakhulu ...
Izimo zohlelo lokusebenza lwezihlalo zehhovisi leGoodtone
I-Foshan Goodtone Furniture Co., Ltd, eyasungulwa ngonyaka we-2014, iyinkampani yefenisha esezingeni eliphakeme futhi ekhethekile ekwakhiweni, i-R & D, ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwezihlalo zasehhovisi ezisezingeni eliphezulu. IFoshan Goodtone Furniture Co., Ltd, esungulwe ngo-2014, inguchwepheshe ...
Sihlalo WeGoodtone Office: Sebenza ngokunethezeka ekhaya
Noma ngabe usebenza ekhaya noma njengamanje uhlala phansi amahora ambalwa wokuphathwa kwekhaya, ukuba nosihlalo wehhovisi we-ergonomic ofanele kungadlala indima ebalulekile, ezokwazi ukuzivumelanisa nomsebenzisi ngamunye futhi inikeze ukusekelwa okuqhubekayo komhlane wakho ophansi. Njengoba sonke sazi, hlala ...
IGoodtone Yenza Umehluko
Sigxile ekugcineni esihlalweni sehhovisi iminyaka eyi-12. Sinezinhlobo ezingaba ngu-14 zochungechunge lwezihlalo zehhovisi. Uma unentshisekelo kusihlalo wehhovisi lethu, ama-pls akhululeke ukuxhumana nathi. Ngokocwaningo olwenziwe yi-University of Chicago, abasebenzi be-WFH nabo basebenza amahora amaningi. Kuzwakala kujwayelekile? Ukuntuleka kwe-ergo ...
Ungayikhetha Kanjani iSihlalo Esikhululekile Sehhovisi?
Uma isihlalo sakho sinamasondo enziwe ngqo ngohlobo lwesitezi ehhovisi lakho, sizohamba kahle kakhulu. Uma ingahambi kahle, sicela uthenge umqamelo wesihlalo. Olunye lwezimali ezinhle kakhulu ehhovisi yisihlalo, esikuvumela ukuthi unciphise ingcindezi nengcindezi emhlane, entanyeni nasemahlombe akho ...
Ungayihlanza Kanjani futhi Uyigcine Sihlalo Sehhovisi
Izindlela zokuhlanza nokunakekela 1. Isihlalo sehhovisi lesikhumba: Sicela usebenzise isiponji esinomswakama ukumanzisa okokuhlanza okhethekile kancane. Ngemuva kokusula ngendwangu eyomile, sebenzisa umenzeli wokunakekelwa kwesikhumba ukuze unakekelwe. Uma usihlalo ehhovisi ngengozi manzi, kufanele wi ...
Usihlalo Wehhovisi Le-Ergonomic Ucwaningo Lwemakethe
Usihlalo Wehhovisi Le-Ergonomic Ucwaningo Lwemakethe IHHOVISI YASIHLOBO Umbiko wakamuva wezobunhloli emakethe yesihlalo sehhovisi uqukethe ucwaningo olunzulu ngosayizi wemboni, iphethini yezwe, ukulinganiselwa kokuthengisa ...
Ukuxhumana Nabaklami: Ihhovisi likaPeter Horn – Home ngokuzayo
Ubuciko bukaPeter Horn: U-Arico Q1: Sawubona, Peter. Ake senze isingeniso esifushane. A2: Sawubona, nginguPeter Horn futhi ngingumklami wezimboni.Ngihlala futhi ngisebenza eJalimane. Isihlalo sefilo njengephrojekthi yami yokuqala yeGoodtone nephrojekthi yami entsha kunazo zonke isihlalo sesikhumba i-Arico.Nginesitudiyo sokuklama lapha eG ...
INDABA YOKWENZA I-ARICO
Indaba yokwakhiwa kwe-ARICO Ngenqubo yokuvakashela kabusha amakhasimende, kutholakale izidingo ezintsha zemakethe. Ngokunaka okuqhubekayo ekwakhiweni nasekuguqulweni kwesikhala samahhovisi asekhaya kanye nokuqoqwa kwempendulo yamakhasimende, uGoodtone uthole ukuthi kunokushoda kwesihlalo sesikhumba esincane esine-sen enamandla ...
Izihlalo ezihamba phambili ze-Office Ergonomic zokuSebenza Ekhaya (2021)
Manje, Ngenxa yomthelela walobhadane, ukusebenza ekhaya kuyaqhubeka kube yinto ejwayelekile kwabaningi, futhi ngale ndlela singakugwema ukuminyana ebhasini nasezitimeleni ngesikhathi samahora okugijima, futhi singangeza ihora elengeziwe lokulala. Ukusebenza ekhaya akuzona zonke izinzuzo. Uma ucabanga ukuthi kuzokwenza ...
Indaba yethu yaqala ngonyaka ka-2008. Emuva ngaleso sikhathi sasibizwa ngeSitzone Furniture, umkhiqizi omncane ohlanganisa izihlalo zamahhovisi eFoshan, eChina. Ngo-2017, sabuyela kuQembu le-UZUO. Eminyakeni eyishumi edlule kubonakale ukukhula kwethu okusheshayo. Kulezi zinsuku sinemikhiqizo engaphansi kwama-8 nabasebenzi abangaphezu kwama-2500 abasebenza kuhlelo lokukhiqiza olungu-3 ...
I-Guangzhou CIFF: I-GOODTONE ibheke phambili ekuzeni kwakho
I-CIFF Guangzhou Mar. 28 ~ 31 Goodtone Booth No.:S9.3C08A CIFF Guangzhou 2021 izobanjwa kusukela ngomhlaka 28 kuya ku-31 Mashi, yefenisha yasehhovisi nosihlalo, impahla yasehhotela, ifenisha yensimbi, ifenisha yezindawo zomphakathi nezindawo zokulinda, izesekeli, izinto zokwakha nemishini ye-fu ...
Ikheli:Cha. 18, Qiaogao Road East, Haizhou Industrial Area, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.